“COVID-19 ကာကွယ်ရေး၊ ကူညီထောက်ပံ့ ဒို့အားပေး။” - OSC Hospital
01 - 656172 ~ 176 | 09 958188506
01 - 656172~176
24 - HOUR EMERGENCY SERVICES
center & clinic
Medical Checkup Center
General Diabetes & Endocrinolog
CT, Ultrasound, X-Ray
Cardiac General Physician
NEWS & COVID-19 UPDATE
WOMEN'S AND CHILD WELLNESS
“COVID-19 ကာကွယ်ရေး၊ ကူညီထောက်ပံ့ ဒို့အားပေး။”
On: Monday October 5th, 2020
ကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားတွင် ကူးစက်ပြန့်ပွါးမှုမြန်ဆန် သော COVID-19 ရောဂါ၏ဂရက်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သာမက နိုင်ငံတကာမှာလည်း စီးပွါးရေး ထိခိုက်ကျဆင်းမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရပါသည်။ယခုအချိန်မှာ လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေများ မညီမျှပဲ ထိခိုက်မှုများစွာ ရှိနေကြရပါသည်။
ထိုသို့ ဖြစ်ပွါးနေမှုများကို လျစ်လျူမရှုဘဲ အများပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးအတွက် OSC ဆေးရုံမှသယ်ပိုးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ထိုသို့သယ်ပိုးဆောင်ရွက်ရာတွင် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီမှစီစဥ်ထားရှိသော မြောက်ဥက္ကလာ ၊မယ်လမု ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော်၀န်း အတွင်းရှိ Community Based Facility Quarantine Centerတွင် ပြည်သူများအသုံးပြုရန် အတွက် ကျန်းမာရေးတွင် လိုအပ်သော အစားအသောက်၊အသုံးအဆောင်နှင့် အထောက်အကူပစ္စည်းများ၀ယ်ယူမှုကို လိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် OSC ဆေးရုံမှ ငွေကျပ် (၁၀)သိန်းအား ဆေးရုံ၏တာဝန်ရှိသူများမှ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီဥက္ကဌ ထံသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
ယခုလို လှူဒါန်းရသောအကျိုးကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ COVID -19 ကပ်ရောဂါကြီးမှ ကင်းဝေးကြပါစေကြောင်း OSC ဆေးရုံမိသားစုမှဆုတောင်းမေတ္တာပို့သ အပ်ပါသည်။
OSC ဆေးရုံမှ ရန်ကုန်မြို့ Stay At Home ကာလတွင် လှူဒါန်းခဲ့ပါသော မွန်မြတ်သော ကုသိုလ်အလှူအား နတ်၊ လူ သာဓု ခေါ်စေသော်
OSC ဆေးရုံမှ ရန်ကုန်မြို့ Stay At Home ကာလတွင် လှူဒါန်းခဲ့ပါသော မွန်မြတ်သော ကုသိုလ်အလှူအား နတ်၊ လူ သာဓု ခေါ်စေသော် COVID-19 ရောဂါ ပြန့်ပွါးမှုအား ထိမ်းချုပ်နိုင်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် နိုင်ငံတော် ...
OSC ဆေးရုံမှ ယနေ့ တွင်လှူဒါန်းခဲ့သော မွန်မြတ်သော အလှူ
OSC ဆေးရုံမှ ယနေ့ တွင်လှူဒါန်းခဲ့သော မွန်မြတ်သော အလှူ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ (င)ရပ်ကွက် သန္တာလမ်းအတွင်းတွင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ စီစဉ်ထားရှိမည့် ပြည်သူများရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် Quarantine Center တွင် လိုအပ်သောအစားအသောက်အသုံးအဆောင်နှင့် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများဝယ်ယူမှုကို လိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် ...
“COVID-19 ကာကွယ်ရေး၊ ကူညီထောက်ပံ့ ဒို့အားပေး။” ကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားတွင် ကူးစက်ပြန့်ပွါးမှုမြန်ဆန် သော COVID-19 ရောဂါ၏ဂရက်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သာမက နိုင်ငံတကာမှာလည်း စီးပွါးရေး ထိခိုက်ကျဆင်းမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရပါသည်။ယခုအချိန်မှာ လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေများ မညီမျှပဲ ထိခိုက်မှုများစွာ ရှိနေကြရပါသည်။ ...
Previous Post: Valentine’s Day Promotion
Next Post: OSC ဆေးရုံမှ ယနေ့ တွင်လှူဒါန်းခဲ့သော မွန်မြတ်သော အလှူ
No. 137/D, Thudhamma Rd, North Okkalapa Township, Yangon Myanmar,
+951 (Hot Line 656 176), 653 107, 662 943
Copyright @ 2021 OSC Hospital.